BARUURTA DUFANKA LEH: HALABUURKA, ISTICMAALKA, HALKA LOO ISTICMAALO - BEERAHA DIGAAGA
Maxay tahay faa'iidada dufanka geela ee qofka?
Goobaha Afrika iyo Australiya waxay mudan yihiin waqti dheer maaha hilibka iyo maqaarka muraayadaha, laakiin sidoo kale dufankooda, sababtoo ah waxay ogtahay in ay tahay qalab wax lagu bogsiiyo jidhka bini'aadamka.
Waqtigaan, dufanku waa mid aad u caan ah dhammaan qaaradaha, iyo sifooyinka faa'iidada leh waxaa lagu xaqiijiyaa daraasado badan.
Wax badan ka baro arintan.
Sida loo helo dufanku
Marka hore, dufanka cusub ee shimbiraha la gowracay waa la burburin karaa. Wax soo saarka ceyriinka ah ee la soo saaro waxaa lagu soo rogaa shaqeyn dheeri ah - xarun iyo sanqadha. Dufanka dhuxusha (saliida) wuxuu ku shaqeeyaa midab lahayn, laakiin waxaa la jilicsanaa waxyaabo badan oo nacas ah oo u baahan in la isdifaaco - borotiinno, ions, metal peroxides, iyo saabuun. Nidaamkan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa caddayn ama nadiifin.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa in aad wax ka barato codsiyada goose, duck, lamb, riyaha digaaga.
Dheecaan dheeraad ah oo badeecadda ah waxaa lagu fuliyaa by uumi. Qasab maaha wax kale
Natiijo ahaan, haddii ay jirto xaalad tayo sare leh, saliiddu waxay ku jiri doontaa asiidh dufan bilaash ah oo aan ka badnayn 0.5%.
Ma taqaanaa? Dhoobabku waa ururiyayaal ah oo ku nool kooxo badan oo had iyo goor daryeesha ammaanka qaraabadooda. Si arrintan loo sameeyo, shimbiruhu waxay sameeyaan waajibaad habeennimo ah oo markaa hurdaan ma seexdaan, jiidaan qoorta iyo raadinta khatarta iman karta.
Guud ahaan, nadiifinta saliida dhuxusha waxay la mid tahay wax soo saarka dufannada kale ee cuntooyinka, oo leh hagaajin yar oo heerkeedu sarreeyo. Waxyaabaha soo baxaya waa mid aan la heli karin iyada oo aan lahayn midab, dhadhan, dhadhan ahaanba waa la xirxiray waxaana loo diraa macaamilka.
Noocyada iyo guryaha waxtar leh
Tifafooyinka ugu horreeya ee shimbiraha shimbiraha ah waxay bilaabeen inay sahamiyaan aqoonyahanka Australia George Hobdey. Waxyaabaha kale, waxa uu sameeyay sahan ballaaran oo ah 500 Aborijiniyiin waxaana ay ogaadeen in midkoodna uusan soo sheegin saameynaha ama xasaasiyadaha xasaasiyadeed ee isticmaalkiisa.
Daraasad ka kooban halbeegga ayaa muujisay maqnaanshaha fitamiinada, hoormoonka ama antioxidants, taas oo sharxi karta guryaha dawooyinka. Sida muuqata, waxaa keena saamiga ugu nugul ee shucaac ah ee saliidda.
Noocyada dufanka dhoobada
Waxyaabahaan badanaa waxa ku jira triglycerides leh asiidh aan soo saarin soo socda:
oleic (48-55%) - wuxuu leeyahay saameyn liddi ku ah anti-bararka;
Palmitic (21-22%) - waxay kicisaa wax soo saarka elastin, kolajka, kor u qaadista maqaarka;
linoleic (7-14%) - waxay leedahay saameyn faa'iido leh oo ku saabsan xaaladda muruqyada iyo xubnaha;
Stearic (8-9%) - waxay fududeeyaa nuugista waxyaallaha firfircoon ee dusha sare ee maqaarka iyo maqaarka, waxay xoojisaa difaaca xaafadeed;
Palmitoleic (3.8%) - dib u soo celiya maqaarka qalalan, wuxuu siinayaa midabeyn;
gamma-linoleic (0.4-1.1%) - waxay gacan ka geysataa soosaarka hoormoonka iyo prostaglandins;
Myristic (0.31%) - ayaa horjoogsanaya horumarka microflora pathogenic iyo khamiir.
Dufanka Ostrich wuxuu leeyahay sifooyin aad u fiican oo bakteeriyada iyo bactericidal ah.
Noocyada cawska, caleemaha buckthorn, dahabka dahabka, aloe, sage cage, blackberry, turmeric, iyo elderberry red ayaa sidoo kale leh hanti-barar ah.
Waxay ka caawisaa in laga takhaluso cudurrada maqaarka, gubashada gubashada iyo dhaawaca kale ee maqaarka. Xataa riyadii qadiimiga ahaa waxay u adeegsadeen ololayaal millatari oo loogu talagalay bogsashada degdegga ah ee nabarkooda.
Thanks to phospholipids ee ka kooban, ay saliid waxaa si fiican u nuugo maqaarka, iyada oo aan la dhejiyo dusha sare. Intaa waxaa dheer, macnaha sare ee linoleic acid wuxuu ka dhigayaa caawimo weyn markaad ka takhalusto xanuunka kudubka iyo murqaha.
Waa muhiim! Laga soo bilaabo hal qalooc ka dib markii la gowraco waxaad heli kartaa 5-7 kg oo dufan ah, iyo shakhsiyaadka dufanka gaar ahaan - ilaa 14-16 kg Dufanka duufanta 10 bilood jir wuxuu bixiyaa wax ka badan 9 litir oo badeeco ah, oo ah qiyaastii 30% miisaankiisa.
Badeecadu waxay leedahay qaab nalal ah oo casri ah oo aad ugu fiicnaanaya taabashada. Waa hypoallergenic iyo si fiican u tagtaa maaddooyinka kale, taas oo ay ugu wacan tahay qayb ka mid ah daaweynta daaweynta iyo qurxinta badan.
Dufanka Ostrich: qaababka arjiga
Dufanka Ostrich, oo ay ugu wacan tahay sifooyinkiisa cajiibka ah, ayaa ku helay codsiyo ballaaran ee daawada, qurxinta iyo karinta.
Dufanka dufanku waa saldhigyo badan oo maskaxda, kiriimyada iyo serumaha loogu talagalay inay quudiyaan oo ay qoyaan maqaarka. Taas macnaheedu waa si buuxda u jilciya maqaarka, cusboonaysiinta unugeeda, dib u noolow, caawimaad ka gaabi iyo xitaa soo bixinta codka.
Maaddada qurxinta, saliida avocado, saliidda sisinta, marigold, lindenka, nettle, iyo saliidda cagaarka ah ayaa sidoo kale si firfircoon loo isticmaalaa.
Intaa waxaa dheer, saliiddu waxay leedahay cadeyn ah anti-bararka iyo saamaynta bogsashada.
Isticmaalka alaabtan waxay ka caawisaa arrimaha soo socda:
waxay hagaajisaa xajinta maqaarka iyo cufnaanta;
waxay kicinaysaa samaynta kolajka;
yaraynta maqaarka maqaarka;
waxay yareysaa cuncunka iyo foosha;
waxay xawaaraysaa bogsashada bogsashada ka dib finanku;
si weyn u yareeyaa muuqaalka cellulite;
waxay kicisaa xayawaanka timaha waxayna xoojisaa;
quudiyaa timaha burburay, dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa dhinacyada kala duwan;
waa ka hortagga xiiritaanka;
waxay ka hortagtaa calaamadaha kala duwan ee dumarka uurka leh.
Ma taqaanaa? Dhoobabku waa waalid cajiib ah. Haddii gogol-xayawaanku u muuqdo meel u dhow qoyaantooda, markaa shimbiruhu waxay ka ciyaaraan fikradda oo dhan - iska dhig inaad jiran tahay, ku dhacdo ciidda, kaca oo dib u dhacdo. Waxay sameeyaan wax walba si ay uga cararaan ilama-yaqaanka iyaga oo siinaya waqti ay kaga baxsadaan.
Si aad u kiciso koritaanka timaha, dufanka dhogorta leh waa in lagu daboolaa timaha, ma dhaqin kahor intaa ka dib, laguna hayo 60 daqiiqo. Ka dib markaa, ku dhaq biyo kulul leh shaambada caadiga ah. Waxaad samayn kartaa nidaamkan 1-2 jeer toddobaadkii. Marka bilawga dhicida ama timo badani timaado, maaskarkan waa in la sameeyaa ka hor inta aan la dhaqin timo kasta.
Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad isticmaasho saliidda maalin kasta sida alaabta daryeelka maqaarka. Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada maqaarka, laakiin waxay leedahay saameyn gaar ah oo wanaagsan oo ah nooca qalalan iyo noocyada isku dhafan. Waxaa intaa dheer, waxaa loo isticmaali karaa labadaba qaabka saafiga ah iyo qayb ka mid ah maaskari ama kareem.
Dufani Tani waa ku dhawaad ​​ur aan lahayn, iyo haddii ay jirto rabitaan ah in si buuxda looga saaro si ay u isticmaalaan sheyga loogu talagalay ujeedooyinka qurxinta, waa ku filan in lagu daro hoos u dhigidda saliidda lagama maarmaanka ah halkaas.
Dhoobabtu waxay leeyihiin difaac aad u wanaagsan iyo karti u leh inay si degdeg ah u soo kabtaan.
Sida muuqata, tayadaas ayaa loo wareejiyey dufankooda, maadaama ay si fiican u muujineyso xaaladaha soo socda:
waxay xanuujineysaa xanuunka, bararka, jimicsiga iyo murqaha muruqyada dhaawacyada;
daaweynaya oo ka hortagaya bararka maqaarka - finanka, cuncun, nabaro cadaadis, abrasions;
fududeeyaa koorsada cudurrada maqaarka - cambaarta iyo cudurka psoriasis;
waxay kor u qaadaan bogsashada gubashada iyo nabarrada postoperative;
wuxuu joojiyaa cuncun, jilicsan oo qoyaan maqaarka;
waxay ka caawisaa daaweynta cudurrada kudubyada - arthritis, arthrosis iyo kuwo kale;
waxay ka hortagtaa bakteeriyada inay ka badiso;
waxay ka ilaalisaa maqaarka ka soo baxa barafka iyo ultraviolet rays;
waxay xoojisaa timaha iyo ciddiyaha.
Si hoos loogu dhigo xanuunka kudunka, ku dabool saliid ama boomaato ku salaysan iyada oo la socdo dhaqdhaqaaqa iftiinka ah ee dhibco xanuun 2-3 jeer maalintii. Oo ku celi habraaca illaa intaadan ka takhalusin xanuunka. Si loo ilaaliyo maqaarka soo baxa ee ka soo baxa iftiinka qorraxda, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rido iyaga oo leh qadar yar oo dufan ah 15-20 daqiiqo ka hor intaadan guriga ka tegin.
Intaa waxaa dheer, cayaartoyda badan ayaa xusay in si deg-deg ah dib u soo kabashada murqaha iyo isgoysyada ka dib markii miisaan lagu sameeyo saliidda dhuxusha. Waxay u gudubtaa si qoto dheer maqaarka waxayna ku siineysaa dareemid nalalka aan caadiga ahayn ee jirka oo dhan.
Waa muhiim! Ka hor intaadan isticmaalin baruurta dufanka leh ujeedo caafimaad, hubi inaad la tashato dhakhtarkaaga.
Qaab dhismeedka, sheyga wuxuu la mid yahay subagga jilicsan, dhadhankiisu waa mid liidata. Faa'iidada dufanka dhoobada ayaa ah in uu ka kooban yahay kolestarool ka badan inta ka baxsan badeecooyinka kale ee xayawaanka. Sidaa darteed, suxuunta la kariyey waa kuwo caafimaad leh oo si fudud u nuugaya jirka.
On badeecada this waxaad karisaa kartaa suxuunta ugu horeysay, duban, bariis ama fuud. Way fiicantahay hilibka shiilan, khudradda, baradhada ama bacriminta rootiga. Ama u isticmaal si aad u sameysid sanduuq. Natiijadu ma aha oo kaliya dhadhanka iyo nafaqo leh, laakiin sidoo kale suxuunta caafimaad leh. Sidaas, hadda waxaad taqaanaa sida loo isticmaalo dufanka dhoobada ah ee loogu talagalay ujeedooyinka caafimaadka, qurxinta iyo culus. Tani waa badeecad dabiici ah oo dhab ah oo qof walba ka caawin doona inuu hagaajiyo caafimaadkooda iyo helitaanka muuqaalka ubaxyada.
Si kastaba ha ahaatee, waa in la xasuustaa in dufanka dufanka uusan ahayn argagax, laakiin kaliya gargaarka daaweynta iyo ka hortagga dhibaatooyin caafimaad oo badan.